Mety tsy hahomby ny dia ara-panahinao raha tsy fonosinao ireo entana 25 ilaina amin'ny valizinao - Fanahy
Mety tsy hahomby ny dia ara-panahinao raha tsy fonosinao ireo entana 25 ilaina amin'ny valizinao
Ny lalanao mamaky ny fiainana dia lava ary feno tsy fahatokisana - noho izany zava-dehibe manandrana manangona ireto entana manaraka ireto ao amin'ny anao ianao valizy ara-panahy araka izay azo atao.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia ho tonga mora ampiasaina isaky ny mandeha rehefa mandroso ny dianao dia hanampy anao hifindra amin'ny olona iray izay mihetsika matetika kokoa avy amin'ny avo kokoa izy ireo.
Mety ho hitanao fa tsy manana entana hanombohana azy ianao, saingy azo tratrarina eny an-dalana izany. Ny sasany mety manomboka kely, nefa mitombo rehefa mandeha ny fotoana, ary ny sasany mitaky ezaka mitohy hihazonana azy.
Ka raha tsy mifampiarahaba isika dia ndao atomboka ny lisitray…
iray. Fitiavan-tena / Fanajana / Fanekena
Fahagagana kely ianao eo amin'ny tontolon'izao tontolo izao midadasika. Tsara tarehy ianao, manana talenta ianao ary afaka manao zavatra lehibe.
Fantatro izany momba anao nefa tsy mbola nahita, nihaona na niresaka taminao aho. Fa fantatrao irery ve izany?
Ny fianarana ny tena mitia, manaja ary manaiky ny tenanao dia tsy mora fa azo antoka fa latsaka eo ambanin'ny elo amin'ireo zavatra tokony hikolokoloana sy iadiana isan'andro isan'andro fa tsy zavatra vao azo.
Na izany aza dia nataoko voalohany teo amin'ny lisitra io satria namboarina be dia be izy io nandritra ireo entana sisa rehetra. Amin'ny alàlan'ny fanehoana fitiavana, fanajana ary fanekena ao anaty, dia manana toerana tsara kokoa ianao hampiasa sy handray soa amin'ny zavatra hafa rehetra.
aiza no handefasana patrol paw
2. Fahamarinana / Fahamarinana / fahamendrehana
Raha vantany vao afaka mitia ny tenanao ianao dia afaka manomboka miaina fiainana tena izy. Ny fitiavana dia mamela anao hiteny ary mihetsika amin'ny fahamarinana SY mivadika mba ho ianao no tena olona fa tsy ilay irinao ho hitan'izao tontolo izao.
Matetika loatra isika no manandrana manafina ny maha-izy antsika marina mba hitazomana ny lafiny voalohany tadiavintsika hanafina ny tolona ataontsika ary hamoahana fifehezana endrika ivelany.
Saingy, amin'ny fanaovana izany dia lasa tsy afaka mamorona fifandraisana lalina sy misy dikany amin'ireo olona hafa sy an'izao tontolo izao isika. Tonga pseudoselves isika - olo-malaza amin'ny tantara foronina mihetsika amin'ny fiainana izay tsy dia aseho izay tena marina sy tena izy.
Inona koa, mila hery be dia be ny olona tsy misy anao, noho izany ny fanangonana ny fahamendrehana ao anaty valizinao ara-panahy dia manala an'io enta-mavesatra io ary mamerina aminao izany angovo izany amin'ny fampiasana hafa.
Ny fiainana ny fiainanao amin'ny fahamendrehana dia mitaky ny hanokafanao sy hanehoanao hoe iza marina ianao ary inona no tsapan'ny fonao. Tsy misy fanontaniana, mametraka anao amin'ny toerana mora tohina izany.
Saingy tsy afaka mihazakazaka amin'ity fahalemena ity ianao raha te-ho marina amin'ny tenanao. Na dia hahatsapa ratra ianao indraindray noho ny fisokafanao, dia hahafahanao hiaina fifaliana mihoatra ireo izay mety ho antenainao hotazomana hatrany.
4. Fanekena ny loza
Ny fifamatorana akaiky amin'ny foto-kevitry ny marefo dia ny loza mitatao.
Tsy misy ny fialana amin'ny zava-misy fa tsy azo antoka ny fiainana - tsy misy olona afaka maminavina marina izay mety hitranga amin'ny ho avy. Ny fialana amin'izao zava-misy izao dia midika hoe manalavitra ny risika, ary rehefa manao izany isika dia mametra ny zavatra mety hiainantsika, tratrantsika na hahatongavantsika.
Tsy milaza aho fa tokony hivoaka ianao ary handray fanapahan-kevitra tsy misy fepetra miaraka amin'ny fiarovana anao sy ny fiainanao. Ny lazaiko kosa dia ny tsy maintsy hidiranao amin'ny tsy fantatra indraindray miaraka amin'ny fahatokiana fa, na inona na inona mitranga, dia hivoaka amin'ny lafiny hafa ianao ok. Mety atahorana hatrany ny fanaintainana sy ny fijaliana mandritra ny fotoana fohy, fa mety misy koa fahasambarana sy fahafaham-po maharitra.
5. Fanafody fanaintainana
Raha miresaka fanaintainana dia tsy zavatra azonao sorohina izany, na inona na inona làlana alehanao amin'ny fiainana.
Izany no maha-zava-dehibe ny fananana fanafody fanaintainana miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Tsy midika izany amin'ny heviny ara-bakiteny hoe mitondra zava-mahadomelina ao anaty kitaponao aho, fa kosa fanangonana zavatra madinidinika izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fijaliana ara-pihetseham-po mety hiainanao.
Ohatra amin'izany ny mozika mampihetsi-po amin'ny findainao, sarin'ny fianakavianao sy ny namanao, fanamafisana holazaina amin'ny tenanao, fahatsiarovana azonao eritreretina, na zavatra hafa tanteraka.
Ny fananana famatsian'ireto fanafody fanaintainana ireto dia tsy hisorohana ny faharatrana aretina, fa afaka manafaingana ny fanarenana azy ianao.
Rehefa miaina ratram-po na fanaintainana , mazàna dia noho ianao niaritra fahotana tsy fantatra. Matetika ny andraikitra amin'izany dia miankina amin'ny olona na olona hafa.
Amin'izao fotoana izao dia manana safidy roa ianao: afaka misafidy ny hanome tsiny azy ireo na hamela azy ireo. Raha mizara ny fanomezan-tsiny azy ireo ianao dia vao mainka miteraka fahantrana bebe kokoa amin'ny tenanao - rehefa dinihina tokoa, dia mety hahatsapa ho tezitra sy malahelo ianao, saingy tsy azonao terena aminy izany fahatsapana izany. Raha ny marina dia mety tsy ho tsapany akory ny ratra naterak'izany.
Ny fomba hendry kokoa dia ny fampiharana ny famelan-keloka. Ny fihetsika toy izany dia ho anao kokoa noho izy ireo - mamela anao hanaiky ny zava-nitranga izy io ary hiala amin'izany. Raha tsy misy famelan-keloka dia tsy ho afaka amin'ny ratra nateraka mihitsy ianao.
Famakiana bebe kokoa: Ahoana ny famelana ny helokao: 17 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ny famelana heloka ny olona iray no dingana voalohany handresena ny ratra nahazo azy taminao, fa raha manohy manao izany hatrany izy ireo dia mety mila hety ianao ao anaty valizinao ara-panahy.
Ireo dia ahafahanao manapaka ireo tadin-tserasera izay mampifamatotra anao roa, ary, noho izany, manakana azy ireo tsy handratra anao intsony.
Ny tadin-dokanga toy izany dia matetika ara-batana sy ara-pientanam-po ary mety tsy ho haingana na mora ny fizotrany, fa ny fahalalana ny fotoana hamelana ny olona sasany amin'ny fiainanao dia zava-dehibe raha te hankafy fahafaham-po maharitra ianao.
Tsy tokony hahagaga anao izany fa mety ilaina koa ny manapaka zavatra, zavatra na fananana sasany amin'ny fiainanao mba hitomboana ara-panahy.
Azoko antoka fa samy te ho afaka hikapoka switch sy hifandray bebe kokoa isika rehetra ny tenantsika ambony , saingy mahalana no tsotra toy izany.
Ho an'ny ankamaroantsika, ny fitomboana sy ny fanovana dia tsy mitranga tampoka, fa kosa mila fotoana maharitra.
Izany no antony, rehefa mandeha amin'ny làlana ara-panahy ianao dia tsy maintsy manam-paharetana amin'ny haben'ny. Na dia mahavita fanovana tsara aza ianao dia tsy misy antoka azo antoka fa haharitra izy io - tsy fahita matetika ny fahazaran-tena ambany no miditra ao anatiny.
Tsy tokony ho tezitra amin'ny tenanao ianao rehefa tsy mitranga haingana araka ny itiavanao ny zava-misy ny tena, ny fahatezerana dia hitazona anao. Ampahatsiahivo fotsiny ny tenanao fa mizotra amin'ny làlana tsara ianao matetika ary ny fihemorana dia mihelina.
Ankoatry ny fahatakarana fa ny fitomboana dia mitaky fotoana, dia tokony hampahatsiahy ny tenanao hatrany hatrany ihany koa fa mitaky asa mafy.
Fanamafisana, fisaintsainana, fanesorana ireo olona ratsy toetra amin'ny fiainanao, famakiana boky, ary na dia ny famakiana ity lahatsoratra ity aza - hetsika rehetra manampy hanosika anao lavitra kokoa mankamin'ny làlana mankamin'ny fahafaham-po ireo.
Aza atao ambanin-javatra ny maha zava-dehibe ny fandraisana andraikitra tsy miova sy misy dikany ary manandrana manatsara ny fahavononanao hanao an'izany.
Azo atao ny manova ny fizotran'ny eritreritra efa ela - ny atidohanao, afaka mamerina ny tenany ihany - fa tsy misy fanoloran-tena amin'ny fotoana sy ezaka. Arotsaho tsara ao anaty valizinao ara-panahy àry ny fikirizana raha tianao ny hahita ny fandrosoanao.
Ny dianao dia tsy maintsy hahitana anao mifanerasera amin'ny olon-kafa tsy tambo isaina, fa anao ihany ny manao ary ny anao irery.
Tokony ho vonona handray andraikitra amin'ny làlan-kaleha ianao, na inona na inona mety ho tonga amin'izany. Amin'ny lafiny sasany, endrika na endrika, ianao dia hanana ambaratongam-pahefana amin'ny vokatry ny zava-nitranga maro ao aminao olon-dehibe fiainana - ny mieritreritra raha tsy izany dia ny manome tsiny ny hafa , ary efa niresaka momba ny maha-zava-poana ny fomba fanao toy izany aho.
Na dia marina aza fa misy zavatra sasany tsy ho voafehinao tanteraka, na dia ianao aza dia tompon'andraikitra amin'ny fomba fandraisanao azy.
Mandray andraikitra amin'ny hetsika ataonao ary ny vokany manaraka dia mariky ny fahamatorana ara-tsaina sy ara-panahy.
Amin'ny fiainana, isika rehetra dia miaina ny fifangaroan'ny tsara, ny ratsy ary ny ratsy tarehy, saingy ny fifantohantsika dia matetika loatra amin'ny faran'ny ratsy amin'ny karazany.
Ny fahaizana maneho fisaorana rehefa misy zava-tsoa dia toetra iray lehibe ananan'ireo olona mahatakatra ara-panahy bebe kokoa. Aleo misaotra an'izao tontolo izao (na Andriamanitra raha irinao) ho zava-dehibe amin'ny fiainanao fa tsy mihevitra ny zavatra ho zava-poana, ary misy foana zavatra tsara tokony hisaorana !
Na dia efa nanana andro nahatsiravina , tokony mbola ho afaka hamorona zavatra marobe fankasitrahana ianao. Ny famoizana ny asanao dia mety ho sarotra ny hiatrehana, ohatra, saingy angamba salama tsara ianao sy fianakaviana be fitiavana hody any an-trano.
Tsy mila tsy raharahianao tanteraka ireo zava-dratsy mitranga, fa aza hadino ny mijery ny soa rehetra izay nahazoanao fitahiana.
12. Fanekena ny hafa
Rehefa manomboka mivoatra amin'ny lafiny ara-panahy ianao dia mety mijery olon-kafa ary maniry izany ho azy ireo. Ny vokatr'izany matetika dia ny faniriana hanova na hanasitrana ny hafa, saingy manakana ny fitomboanao izany.
Na dia mety manandrana manampy azy ireo amin'ny fahatsaran'ny fonao aza ianao dia hanaiky fa tsy ny olona rehetra dia mitovy sambo aminao. Ny olona sasany fotsiny dia tsy vonona ara-tsaina hanao fanovana lehibe amin'ny fiainany ary ny hafa tsy te akory.
Aza adino: mifehy ny fiainanao sy ny anjaranao ihany ianao. Azonao antoka fa afaka miresaka momba ny dia hitanao fa ianao, ary izany dia mety hahatonga ny hafa haniry hahafantatra bebe kokoa, fa aza milaza amin'izy ireo fa diso izy ireo miaina amin'ny fomban'izy ireo - rehefa dinihina tokoa, dia niaina toy izany koa ianao taloha.
Fa kosa, tandremo ny fahasamihafana maro ananantsika rehetra hajao izy ireo . Ianao dia tokony ekeo ny olona toa azy ary tsy mamorona eritreritra ny fahamboniana - rehefa dinihina tokoa, tsy ho valin'ny ‘tena ambony’ ve izany?
13. Tsy fahalalana
Ny zavatra mifamatotra tsara amin'ireo hevitra nolazaiko teo aloha momba ny fanekena ny hafa dia ny fiheverana ny tsy fahalalana. Raha fintinina dia tena kely fotsiny no fantatsika mazava tsara, ary kosa, manamafy fotsiny ny hevitsika amin'ireo zavatra mifototra amin'ny fari-pahaizantsika ankehitriny.
Raha tokony ho miaina anaty tahotra ny tsy fantatra , mila mandray azy ianao ary manaiky fa misy zavatra tsy ho fantatrao tsotra izao. Rehefa manao izany ianao dia ho tsapanao fa mihena ny fanahianao.
Ankoatr'izay, ny fanekena ny tsy fahalalana dia hametraka anao amin'ny toerana tsara kokoa hifaneraserana amin'ireo olona izay tsy mitovy amin'ny anao ny fomba fijeriny. Tsy ho hitanao ho fandrahonana intsony izy ireo ary ho azonao kokoa ny hanaiky azy ireo rehefa tsy misy faniriana hanova azy ireo.
Ireo teboka roa teo aloha momba ny fanekena sy ny tsy fahalalana dia mifandray akaiky koa amin'ny fanjakan'ny fahabangana.
Na dia mety tsy ho hitan'ny mason'ny maso aza izany rehetra izany, ny olona rehetra - ianao sy izaho dia nampiditra enta-mavesatra mavesatra loatra. Ity no lanjan'ny lasa sy ny vinavinanay hatao amin'ny ho avy.
Saingy noho io entana io dia miady mafy isika hahita an'izao tontolo izao. Ny fahitantsika dia manaloka ny hevitsika mialoha momba ny tokony hisian'ny zavatra ary izany dia mitaona ny eritreritsika sy ny zavatra ataontsika amin'ny lafiny lehibe.
Tsy mora ny mamoaka io lanja io ary manafoana ny enta-mavesatra asehony. Mety tsy ho vitanao mihitsy ny hisintaka tanteraka ny tenanao, fa amin'ny alàlan'ny fiezahana mafy sy am-pahatsorana, azo atao ny manatona ny fanjanahana rehefa mandeha amin'ny fiainanao andavanandro.
Midika izany fa afaka miatrika toe-javatra sy olona tsy misy fitsarana an-tendrony na fitongilanana tsy mahatsiaro tena ianao. Ny fahitana ny zava-misy indray amin'ny fomba toy izany dia midika fa afaka mihetsika mifototra amin'ny zavatra hitanao eo alohanao fa tsy izay lasa teo alohany.
15. Ny Ankehitriny
Tsy afaka miresaka momba ny fahabangana aho raha tsy miresaka momba ny fiainana amin'izao fotoana izao - rehefa dinihina tokoa, ny fotoana ankehitriny dia ny tena misy.
Amin'ny lafiny iray, iray izy ireo. Rehefa tena miaina amin'izao fotoana izao ianao dia tsy mihevitra ny lasa sy ny ho avy ary izany indrindra no dikan'ny hoe foana. Izy ireo dia lalana mankany amin'ny iray hafa.
Nampisaraka azy ireo aho eto satria tiako ny manasongadina ny famelana ny fiheverana mialoha ny fahabangana, raha ny tanjon'ny fiainana ankehitriny kosa dia hafa kely.
Marina fa ny saina tsy misy eritreritra dia iray amin'izao fotoana izao, fa ny famafana ny saina dia miteraka banga ao anatiny hisarihana ny tena toetran'ny zava-misy. Noho izany, ny hoe ao anaty toedranonanana ankehitriny dia midika fa miaina an'izao tontolo izao tanteraka ianao ary tsy misy fetra.
Tsy mijery intsony ianao, fa tsy mahita fa lasa iray miaraka amin'izao tontolo izao. Manomboka mahatsapa ny fitempon'ny fon'ny zava-misy ianao, ny tena toetran'ny fiainana, ary fahatsapana tsara izany.
16. Fitaratra ho an'ny saina
Iray amin'ireo paikady mahomby indrindra amin'ny famahana ny fihazonana izay anananao ny tenanao ambany dia ny mijery ny eritreritrao manokana.
Rehefa mijery fitaratra ara-batana ianao dia mamela anao hijery ny endrika ivelany izay hitan'izao tontolo izao, ary amin'ny fitaratra fitaratra ho an'ny sainao dia azonao atao ny mandinika ny tontolo anatiny koa.
Rehefa mijery ny fiasan'ny sainao ianao, rehefa manara-maso ireo eritreritra mandalo azy ianao dia afaka manomboka mamantatra ireo izay miorim-paka ao amin'ny ego.
Rehefa manao an'ity fihetsika ity ianao nefa tsy misy fitsarana ary tsy misy fihetsem-po dia manomboka malemy avy hatrany ny ego ianao. Azonao atao ny mamantatra ny fizotran'ny eritreritra ambany kokoa, mahita azy ireo momba ny toetrany ary misafidy ny tsy hanaraka izany.
Na dia tsy tokony hanandrana mamoritra eritreritra toy izany aza ianao rehefa tonga izany, raha vantany vao nanao izany izy ireo, dia azonao atao ny misafidy ny hamela azy ireo hivezivezy ao an-tsainao indray. Amin'izany fomba izany, very ny hery mitaona aminao ny ego.
Amin'ny maha zaza anao dia kely ny safidy anananao afa-tsy ny mametraka fitokisana sy finoana tanteraka amin'ny olon-kafa hikarakara anao. Na eo aza izany, rehefa mihalehibe isika, dia latsaka ny mari-pahaizana atokisantsika ny olon-kafa.
Rehefa mandeha amin'ny lalanao ara-panahy ianao dia hahita olona maro sy toe-javatra maro izay tsy fahatokisana ny fihetsika voajanahary. Ny tena ambany dia hahita azy ireo ho fampitahorana ary hiambina izy ireo amin'izay mety ho fanafihana rehetra - ara-batana na ara-pihetseham-po.
Ary na izany aza, amin'ny alàlan'ny fahatokisana dia azonao atao ny miala amin'ny tahotra sy fanahiana be dia be ary mamela ny tenanao hino ilay iray hafa. Tsy maintsy hampihatra ny fahabangana avo lenta ianao rehefa niresaka kely teo aloha satria matetika ny fiheveranao ny olona sy ny toe-javatra no manakana anao tsy hanana fahatokisana.
Rehefa ianao mahatsapa ho afaka matoky kokoa , mahatsiaro tsy dia atahorana loatra ianao, ary manomboka mampiseho ny tena tenanao amin'izao tontolo izao. Rahoviana tsy ampy ny fahatokisana , mirona kokoa hanafina ireo faritra marefo aminao ianao mba tsy hampiseho fahalemena. Saingy, araka ny voalaza, ny faharefoana dia matetika mialoha ny kiran'ny fifaliana lehibe sy fanandramana manankarena sy lalim-piainana.
18. Ny fahaizana miteny tsia
Ny fitakiana amin'ny fiainana maoderina dia tsara - azonao atao ny mameno ara-bakiteny ny segondra tsirairay amin'ny andronao mifoha raha tianao izany.
Ary na izany aza, satria eo fotsiny ny mety, dia tsy ho tianao foana ny handray azy.
Amin'ny dingana sasany amin'ny dianao ara-panahy dia mety hahita ilay fahatsapana fa tokony hivoaka ianao ary hiaina isak'izay toy ny hoe io no farany anao. Izany dia mety hiteraka tsy fahafaha-manao be loatra lazao ny olona .
Mety hieritreritra ianao fa ny zavatra niainanao zarainao amin'ny hafa dia inona no atao hoe fiainana - ary misy ny fahamarinana momba an'io - fa ny fitomboana ara-panahy dia misy ifandraisany amin'ny zavatra niainanao tao anaty, amin'ny tenanao, ary tahaka ny tenanao . Raha toa ka midika hoe tsy afaka ny ho tena tena izy ianao, dia hanakana ny fitomboanao izany.
Noho izany, amin'ny fotoana iray amin'ny fotoana dia tokony ho fantatrao hoe rahoviana dia ampy. Ny fandavana ny fanasana dia tsy tokony ho fandavana an'io olona io ary, toy izany koa, ny filazanao hoe tsia amin'ny fotoana mety hitranga eo aminao dia tsy midika foana izany hoe diso ianao.
19. Ny fahaizana miteny Eny
Etsy ankilany, tsy maintsy fantarinao ny fotoana hilazana eny raha toa ka tonga mandondona ny fotoana iray mahatsapa hoe 'mety'.
Ity fahatokisana nolazaiko teo aloha ity dia zava-dehibe eto tsy ny fahatokisana olona hafa ihany, fa matokia ny tenanao, hino fa mahavita mizaha zavatra rehetra ianao raha mametraka ny sainao ho amin'izany.
Anisan'izany ny fatokiana fa afaka miatrika fanaintainana mety hitranga ianao. Rehefa dinihina tokoa, ny fanararaotana fotoana dia tsy midika foana fa ho tonga araka ny nantenanao.
Na dia tsy miharihary foana aza ny fotoana tokony hanaovanao hoe eny na tsia, dia misy hery mitarika iray izay azonao atao hatrany ny mitady fanampiana.
Samy manana ny fiheverantsika azy isika rehetra - zavatra iray manokana manokana izay toa maneho ny heviny ho toy ny fahatsapana ao anaty. Raha vantany vao noraisinao ny fampahalalana mifandraika rehetra momba ny toe-javatra iray, ny intuition-nao angamba no mpitari-dalana tsara indrindra raha misy zavatra mety aminao na tsia.
Hitanao, na dia ny ampahany lojika ao amin'ny atidohanao aza dia afaka manandrana mandanja ny tombony sy ny lafy ratsy, ny intuition dia ampahany amin'ny saina tsy mahatsiaro tena mahery vaika kokoa izay manana fampahalalana bebe kokoa aza eo am-pelatanany handraisana fanapahan-kevitra.
Famakiana bebe kokoa: 'Mampihetsi-po' ve ianao sa karazana toetran'ny 'tsy manam-pahaizana'?
Tsotra toy izao, toa azoko atao ny manamarina ny herin'ny torimaso tsara ary, ny mifanohitra amin'izay, dia ny fitaoman-doha ratsy ateraky ny adin-tsaina amin'ny vatantsika sy saintsika.
Ny saina reraka sy miady saina dia tany fisakafoanana ho an'ny tena ambany ary azo antoka fa tsy hahatsapa ho ara-panahy ianao rehefa mifehy.
Ny fifohazana dia teny mety indrindra amin'ny dia ara-panahy satria rehefa mifoha voajanahary ianao dia manao izany satria miala sasatra tanteraka. Mba hifohazana amin'ny heviny ara-panahy dia mila miala sasatra tanteraka koa ianao.
Izany no antony tokony hamonosanao fitsaharana amin'ny alina amin'ny valizinao ho zava-dehibe. Ary ho an'ireo fotoana mihabe ny adin-tsaina dia aza atao ambanin-javatra ny mamaha azy amin'ny alàlan'ny fomba misokatra ho anao.
22. Telefaona iray
Ny fananana tambajotra na vondrom-piarahamonina manodidina anao na amin'ny fotoan-tsarotra na amin'ny fotoan-tsarotra dia ahafahana mandroso ara-panahy.
Eny, marina fa tsy misy olon-kafa afaka manao ny dianao ho anao, fa tsy midika akory izany hoe mila mandeha irery foana ianao. Isika dia zavaboary ara-tsosialy ary ny taonan'ny evolisiona dia nametraka filàna fifandraisana ao amintsika.
Na vondron'olona mpinamana io na fianakaviana akaiky akaiky, rehefa mahatsapa ianao fa tena misy sy lalina ny tena, lehibe kokoa noho ny fitambaran'ireo ampahany ireo. Miara-miatrika olana ianao noho ny hiady mafy amin'ny olona iray, ary afaka mahatsapa fifaliana lehibe kokoa noho ny amboadia mitokana.
Noho izany aza matahotra ny manangona telefaona anaty valizinao mba hifandraisana amin'ireo olona izay manan-danja indrindra aminao.
23. Boky iray
Mandritra ny dianao ara-panahy dia maro ireo fanontaniana tsy maintsy ihodivirana ao an-tsainao hoe inona ny làlan'ny lozika rehefa mitranga izany? Mamaky boky, mazava ho azy.
Mitovy amin'ny fomba ianaranao ny siansa na ny matematika amin'ny boky, ny boky avy amin'ny lalan'ny fanampiana ny tena dia tsy zavatra jerena amin'ny fanamavoana sy fisalasalana. Betsaka no nosoratan'ireo mpanoratra ara-panahy sy akademika nahavita azy ary azonao atao ny manitatra ny sainao amin'ny famakiana azy ireo.
Raha ny tena izy dia be dia be ny boky amin'ity karazana ity ka azo atao ny mahita iray namboarina mivantana amin'ireo olana mety manahirana anao. Aza atao ambanin-javatra ny herin'ny boky toy ny mpanasitrana sy ny mpampianatra.
Na dia sarobidy be aza ny boky nosoratan'olon-kafa, misy ihany koa ny ady hevitra mafy milaza fa ny boky tsara indrindra vakianao dia mety ilay nosoratanao.
Izao no tiako holazaina fa afaka manao izany ianao gazety ny zavatra niainanao, ny eritreritrao ary ny zavatra tsapanao, ary avereno vakio izany mba hahazoana antoka fa izay zavatra ianaranao momba anao dia tsy hadino fotsiny rehefa mandeha ny fotoana.
Azonao atao ny mamantatra safidy ratsy, hadisoana, fomba fisainana tsy manampy ary zavatra hafa heverinao fa manakana anao. Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny lafy tsara rehetra koa, satria ireo dia mitovy ihany raha ny amin'ny fianarana tamin'ny lasa no resahina.
Ny fanoratana zavatra toy izao dia fitsaboana ara-pahasalamana - afaka manampy tokoa amin'ny fampitoniana ireo zava-manahirana anao sy mampangina ny sainao.
25. A Stopwatch
Samy manana fotoan-tsindrona isika rehetra ary matetika izy ireo dia mety hahatonga antsika hanana olana. Ny hatezerana no fisehoana mahazatra indrindra an'io ary, amin'ny hafanan'ny fotoana, dia mety hiteny na hanao zavatra hanenenantsika isika avy eo. Mety misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra noraisina nefa tsy nodinihina tsara.
Izany no maha-fahendrena ny mitondra fanakanana ara-tsaina miaraka aminao ka rehefa mieritreritra ianao fa mety hanao fihetsiketsehana noho ny tsindroka dia azonao ampiasaina izany hanisana hatramin'ny 10 alohan'ny hanaovana izany.
Ho gaga ianao amin'ny fomba mahomby mety hisy zavatra tsotra loatra amin'ny fisorohana anao tsy hidina amin'ny làlana tena tsy tianao hidina. Izy io dia ahafahanao misaina mazava sy mitombina, eo am-pihainoana tsara ny intuition anao (izay tsy mitovy amin'ny impulsivity tokony ampiako).
Izay no mameno ny lisitry ny zavatra heveriko fa tena ilainao rehefa mandeha amin'ny làlana ara-panahy ianao. Araka ny efa hitanao izao, misy rohy voajanahary eo amin'ny maro amin'ireo entana izay tsy tokony hahagaga raha maneho ny fiasan'ny avo kokoa.
Amin'ny famonosana ny valizinao ara-panahy amin'ireto entana ireto - sy zavatra hafa - dia mamorona loharano iray ianao izay afaka mahita anao amin'ny zavatra rehetra mety hitanao amin'ny fiainana. Hanampy anao izy ireo rehefa mikaroka fitomboana manokana ianao ary hahafahan'izy ireo mahatsapa ny filatsaky ny potika rehetra anananao.
Tazomy ho akaiky foana ity lisitra ity ary avereno jerena hatrany hatrany izy io mba hahazoana antoka fa mitazona ireo entana ilaina indrindra ireo ianao.
ahoana no hiandrasana olona tianao
ny famaritana ny mahery fo foana
fidorohana mpanjaka 2017 fidirana tampoka
wwe shawn michaels lohahevitra hira
ahoana no hiverenana amin'ny sakaizan'ny ex narcissist